FIOFIO - MAHAJANGA : Raim-pianakaviana iray hita faty nihantona tao an-tranony
Ny vadiny handeha amin’ny ‘douche’ amin’ny telo maraina no nahita ilay rangahy nihantona tamin’ny hazon’ny tafo, tao an-tranony amin’ny alalan’ny lambahoany. 5 décembre 2017
Araka ny nambarany dia nifamaly izy ireo tamin’ny 10 ora alina tany, ary novonoin’ilay rangahy io ramatoa io. Namaly izy ka notorahany tamin’ny sotro teny an-tanany ilay rangahy. Mbola naverin’ilay rangahy taminy ny toraka sotro ary natosiny navoakany ny trano ilay ramatoa nefa tsy miakanjo fa sikina kely fotsiny. Niverina haingana ilay ramatoa ary notereny tao amin’ny varavarana.
Tafiditra ihany moa avy eo ary tsy namaly intsony izy araka ny filazany. Lasa natory izy avy eo ary izy nifoha alina no nahita ny vadiny efa mihantona. Nampandre avy hatrany ny fiarahamonina izy ary ireo indray no niantso ny tompon’andraikitra. Nidina teny an-toerana ny Bmh sy ny polisy nanao ny fizahana. Araka ny nambaran’ny dokotera moa dia sokajiana ho fahafatesana mampiahiahy hatrany ny tranga toy izao amin’ny voalohany.
Ny Bmh sy ny polisy no maka ny singa rehetra manodidina ny tranga ary manao ny famakafakana ara-teknika, ahafahana milaza na tena namono tena marina ilay olona na novonoina dia nahantona. Nentin’ny polisy moa ny razana taorian’ny fizahana teny an-toerana.